Marxuum Axmed Kismaayo oo lagu aasay Hyderabad. | puntlandi.com
Marxuum Axmed Kismaayo oo lagu aasay Hyderabad.
Alle ha unaxariistee Marxuum, Axmed Maxamed Cali (Kismaayo), ayaa maanta salaadii Duhur ka dib meydkiisa lag aasnay qabuure ku yaala magaalada Hyderabad ee dalka India.
Muslimiin badan oo isugu jira Soomaalia iyo Ajaanib ayaa ka qeyb qaatay aaska Axmed Kismaayo oo shalay subax ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Hyderabad ee dalka Hindia.
Taariikhda Axmed Kismaayo.
Axmed kismaayo waxaa uu ku dhashay magaalada Kismaayo dabayaaqadii Sannadkii 1964, wuxuuse waxbarashadiisa h/dhexe iyo sare ku dhammaystay magaalada Muqdisha.
Axmed waxaa u ahaa qoraa hiwaayadiisu tahay qoraalka iyo akhriska. Sidoo kale waxaa uu ahaa dadka aadka u xasuustaa(xifdiya) dhacdooyinka soo mara ama uu maqlo, taasoo u sahay inuu hayo taariikh badan oo uu ku dhaxalay sheeko iyo shaahid. Waxaa uu qoray labo buug oo kala ah: “Hoygii Badbaada(2011) iyo Layliga Suxufiga(2017)”. Sidoo kale, waxa uu tifo tiray buug qiimo badan oo ka hadlaya taariikhdii hore ee Soomaalida oo uu qorey Siciid Shiidaad.
Qoraal kooban oo uu Axmed Kismaayo ku bidhaaminayo buugaas waxaa uu yiri:”
10-Kii Agoosto 2017, ayuu Axmed ku geeriyooday hoteel ku yaala magaalada Haydarabad ee dalka Hindiya oo uu muddo labo todobaad ah u joogay in qaliin looga sameeyo cunaha oo uu kaga dhacay cudurka kansarka. Waxaa uu ka tegay 8 gabdhood, 7 wiil iyo labo xaas. …….allaha u naxariisto….. walaalkay Axmed Maxamed Cali.